ချင်းပြည်နယ် ထန်တလန်မြို့တွင်မီးရှို့ခံမှုတတိယအကြိမ် ထပ်မံဖြစ်ပွားလျက်ရှိ – BNN
BreakingNews : Thantlang Inn pawl an Kaang Cuahmah Than
Thantlang inn pawlavoi 9nk an kaang cuahmah tthan. Atu ca kan ttial lio caan an kaang cuahmah.
Innakanghnak zawn hi Lungtial sang ahasi i, inn zeizahakangh cang timi fiang in theihasi rih lo.
ချင်းပြည်နယ် ထန်တလန် မြို့တွင် တတိယအကြိမ်မြောက်မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားနေသည်ကို မြင်တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ – The Chin Journal
ယနေ့ညတွင် ထန်တလန်မြို့ လူနေအိမ်တွေ ထပ်မံမီးရှို့ခံရပါတယ်။ လုံတီာလ်ရပ်ကွက်တွင် မီးလောင်နေတာဖြစ်ပြီး လက်တလောတွင် မီးလောင်သည့် အိမ်အရေတွင် အတည်ပြုဖို့ လို့မရသေးပေ
Tags: Breaking NewsChin statefire accidentSpring RevolutionThantlang